अब विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र लगाउनुपर्ने – Gorkha Sansar
कार्तिक १९, गोरखा ।
विद्यार्थीहरुका लागी विद्यालय जाँदा परिचय पत्र खासै आवश्यक पर्दैन, त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयमा भने झनै वास्ता गरिँदैन । धेरैजसो निजी विद्यालयहरुमा भने परिचय पत्र अनिवार्य गरेको पाइन्छ । तर गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ७ ले भने वडा कार्यालयबाटै बजेट छुट्याएर वडाभित्रका सवै सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुका लागी परिचय पत्रको व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई नियन्त्रण गर्नका साथै शिक्षाको समेत गुणस्तरमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्याउनको लागी यस्तो कार्यको थालनी गरेको वडा नंं. ७ का वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अहिले पहिलो चरणमा वडाकै सवैभन्दा ठूलो विद्यालयको रुपमा रहेको श्री जीवन ज्योति मा.वि.मा पुगी परिचय पत्र वडाध्यक्ष आफैले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक बद्री बहादुर पाण्डेलाई परिचय पत्र हस्तान्तरण गर्नुका साथै केही विद्यार्थीहरुलाई समेत आफैले परिचय पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । परिचय पत्र संगसंगै अब छिटै विद्यार्थीहरुका लागी टाइ र बेल्टको समेत व्यवस्था गरी अघि बढने योजना रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पाण्डेले बताउनुभयो ।
उक्त वडामा ६ विद्यालयमा बाल कक्षा देखि कक्षा १२ सम्म गरी करीब १५०० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।